Ibrahimovic “Libaaxu wuxuu dhashaa isagoo Libaax ah aniguna waxaan ahay Libaax” – Gool FM
Ibrahimovic “Libaaxu wuxuu dhashaa isagoo Libaax ah aniguna waxaan ahay Libaax”
(Manchester), 27 Feb 2017 –Weeraryahanka kooxda Manchester United Zlatan Ibrahimocic ayaa xalay guul u horseeday kooxdiisa kaddib markii uu dhaliyay laba gool oo mid uu ahaa kii guusha ee daqiiqaddii 87′ ciyaartii kama dambeysta ahayd ee ay ku qaadeen Koobka EFL iyadoo kulankaasi ay 3-2 kaga badiyeen Southampton.
Ibra oo 35 sano jir ah ayaa isagoo jeesteynaya wax auu yiri “Libaaxu wuxuu dhashaa isagoo libaax ah, taa micneheedu waa inaan ahay Libaax, waxaan dareemayaa heer wanaagsan, aad ayaan u tababartaa, dadka igu yaqaanna qolka tababarka way garanayaan in aan si adag u tababarto, waxaan leeyahay hadaf xilli ciyaareed walba, si aan u gaaro hadafkaasina waxaan u baahanahay inaan si adag u diyaar garoobo waana sababtaasi midda aan u gaaray guulaha aan gaaray”.
“dad badan waxay qabeen in aanan sameyn karaynin waxa aan haatan sameeyay, weli laba bilood ayaa xilli ciyaareedka ka sii dhiman waana inaan sugnaa” ayuu sii raaciyay laacibkii hore ee Paris Saint-Germain, Ibra.
“Waxaan aaminsanahay inaan weli samaynayo wixii aan sameyn jiray sanad walba, laakiin dadka qaar ma aqbalayaan mana qirayaan, waayo waxay rumeysnaayeen in aan guulahaasi Horyaalkooda ku gaarin ee aan meel kale ku gaaray, haatan gurigoodii ayaan imid, waxaana samaynayaa weli wixii aan sameyn jiray sanadihii la soo dhaafay, waxaan u muuqdaa mid wanaagsan, waxaan dareemayaa firfircooni, waxaan dareemayaa inaan ahay sida Xayawaan” ayaa laga hayaa xidiggii hore ee Sweden Ibrahimovic.
''Lama yaabani bandhigga cajiibka ah ee Manolo Gabbiadini''
PSG waxay qorsheynaysay in Di Maria ay ka iibiso Shiinaha ka hor wacdarihii uu ku dhigay Barcelona